သဘာဝရဲ့ အနိုင် နဲ့ အရှုံး..
ဘက်တီးရီးယားကို ချေမှုန်း..ပင်နီစလင်လို မှိုမျိူးရှိတယ်။
ကျားက တောဝက် ကိုလိုက်ရန် သန်မာသောခွန်အားရှိတယ်..
တောဝက်က ကျားကိုပက်ရန် ချွန်မြသောအစွယ်ရှိတယ်။
သဲကန္တာရဆူးရစ်ပင်မှာ ရေသိုလှောင်တဲ့ ရွက်ပြားရှိတယ်.
ရွံ့ နွံ့ လတာပြင်က လမုပင် လေရှူမြစ်တွေ ရှိတယ်။
အမြဲစိမ်းသစ်တော ပုတ်သင် ဘဘာဝရဲ့အရောင်ပြောင်းခြယ်။
ရန်သူမြင်ရင် ရေဘ၀ဲ မှင်ခြယ် ကိုယ်ရောင်ဖျောက်တယ်။
ဘာမှ အားမငယ်နဲ့ …
သင်၏ Will Power သို့ မဟုတ် သံဌိဓါန် ယုံကြည်ချက်
Survival… သို့ မဟုတ်..သက်ရှင်နိုင်မှူစွမ်းပကား..
Adaptations သို့ မဟုတ်.. ခံနိုင်ရည်ပြောင်းလွဲမှု စွမ်းပကား
သင် မျိူးစေ့ချဖို့ ဟာ သင်၏ တာဝန်
သင့် မျိူးဆက်ရှင်သန်ရန် သင်၏ တာဝန်။
ရေခူလို သာမညပေမဲ့..သင်..အဆိပ်ဆူးတွေ ဆင်။
ဖြူလို အကောင်သေးပေမဲ့..သင် ပက်ဆူးတွေ အသင့်ပြင်
ရေမြွေလို အိပ်နေသော်ငြား မြေဟောက်လိုပေါက်ဖို့ ပြင်။
သမင်လို အပြစ်မဲ့ပေမဲ့..ဦးချိူသွေး ခတ်ဖို့ ပြင်.
မတရားတာရှိ..သဘာဝတောင် ခေါင်းငုံ့ မကြည့်ဖူး.
ဒို့ လူသားတွေ ငြိမ်ခံရမလားဟေ့..
ဒို့ ဘိုးဘွားပိုင်..ဒို့ အားလုံးဆိုင်တဲ့မြေ…
ဒို့ သယံဇာတတွေ စားသုံးရန် အခွင့်အလန်း မရှိပါသလား။
ဒို့ ကိုးကွယ်ရာ ယုံကြည်မှု ဒို့ မ ကာကွယ်သင့်ပါသလား။
ဒို့ ဘိုးဘွားကောင်းမှု ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေ မထိမ်းသင့်ပါသလား
ဒို့စာပေ အနူပညာ..စာကြည့်တိုက်တွေ မရှိသင့်တော့ပြီလား.
ဒို့ နိူင်ငံ ဂုဏ်ဆောင် ပြည်သူ့ ရင်ပြင် ပြည်သူ့ ပန်းခြံ မရှိသင့်တော့ပြီလား။
ဒို့ သားမြေးတွေ ကစားရန် ကစားကွင်းတွေ မရှိသင့်ပါသလား..
ဒို့ ပြည်သူတွေ အလင်း..လျှပ်စစ်မီးမလင်းသင့်ပါသလား.
ဒို့ မြေက ထွက်သောဆန်စပါး..ဒို့ မစားထိုက်ပါသလား.
ဒို့ မျိုးဆက်တွေ အတွက် စာသင်ကျောင်း ဒို့ မတက်ထိုက်ပြီလား.
ဒို့ ပြည်သူအတွက် ကျန်းမာရေး ဆေးပေးရုံမရှိသင့်တော့ပြီလား
ဒို့ပြည်သူုအချင်းပွား မျှတသောတရားဥပဒေမရှိတော့ပြီလား..
ရေသန့်လေသန့်အစာသန့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့် ..အကျင့်စာရိတ္တသန့် 
ဒို့ ပတ်ဝန်းကျင် ရေမြေအတွက်..ဒို့ တတွေ ထိမ်းသိမ်းရန် တာဝန်မရှိပြီလား။
ဒို့တတွေ၏ အသက်စည်းစိမ်ဥစ္စာ..ကာကွယ်ခွင့်မရှိပြီလား.
လူ၏ တန်ဖိုး..လူ၏ လွတ်လပ်ခွင့်..လူ၏ စွမ်းအား လူ၏သမာဓိ
လူ၏ အဆင့်အတန်း လူ၏ ထီထွင်အား လူ၏ တွေးခေါ်ဥာဏ်
အမှောင်ထဲမှာ အလဟသ အချီးနှီးခံမည်လော…
ငွေများ ငွေနိူင်..ငွေရှိသူ ပိုင်..
ရှိသမျှ အမိုးခွါ.. တိုင်ချွတ်ရောင်း
ပြည်သူအတွက် မကျန်တာ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာတိုက် ဟောင်းလောင်း
ငုံ့ ခံနေတာ..ဒို့ အပြစ်ပါ တကား…
ကြောင်ဆိုရင်…လက်သည်းထုတ်ကြဖို့အချိန်တန်ပြီ..
မြွေပွေးမှန် အမောက်ထောင်ပြဖို့လိုသည်.
ကင်းမြီးကောက် မှန် အမြီးထောင်တုတ်ကြရန်လိုပြီ။
မတရားမှုမှန် တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရန် လိုသည်။
လူဘ၀ သည် တကြိမ်သာမွေး..တကြိမ်ဘဲသေသည်။
ရခဲသောလူ့ ဘ၀ လွတ်လပ်စွာ လူပီသရန်ဖြစ်သည်။
သင့် ၏ စွမ်းရည်သာလျှင် တန်ဖိုးမဖြတ်အပ်။
သင်သည်သာ သင်၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်၏။
သင်သည်သာ သင့်အနာဂတ်အတွက် ကိုးစားရာဖြစ်၏။
သင်သည် ပိုင်သည် သင်၏ အနာဂတ်…
လမ်းဆုံမှာ ရပ်နေ..မတွေဝေနဲ့ တော့..
ကဲ လာ..ခွပ်လိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း…
ဒို့ ၏ မြေအတွက်….
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ လွတ်မြောက်ရေးအတွက်…
" ကျွန်တော်လှန်ရေးက စပါတာကပ် ကိုမွေးဖွားသလို
စပါတာကပ်ကြောင့်လည်း ကျွန်တော်လှန်ရေး မွေးဖွားတယ် "
" သင်၏ သဘာဝပေးသတ္တိ..တော်လှန်ရေးအတွက် အသင့်ရှိစေ..
လက်မတို့ ပါရစေနှင့်..ရန်သူ အပေါ် မီးလို ရေလိုကျင့်.."အမှန်ဟာ အဆုံးမှာ အနိုင်ရတာထုံးစံ..
သင့်တာဝန်က ရွေ့ အောင်သာ ဆက်တွန်းကြပါရန်။
မသဒ္ဓါ ( ၂။၂၃။၂၀၁၀)
တပြည်လုံး မိစ္ဆာဒိဌိတွေ ခိုးယူတာကုန်ပါပြီ...ရန်သူကိုတွန်းလှန်ရန်.မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိသည်။ ဤသည်မှာ သမိုင်းပေးတာဝန် ဖြစ်၏။
မမေ့ပါနှင့်..မြန်မာသည် သင့်ဘိုးဘွားပိုင်..သင့် ရပိုင်ခွင့် သင် ပိုင်ဆိုင်ရန်..သတ္တိတံခွန်ထူ..တအိမ်တယောက် အားတင်းထွက်ကြပါတော့ရန်....စေတနာဖြင့် အကျိုးမျှော်...နှိုးဆော်ပါသည်.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:23 AM 1 comments
ကျနော်နာမည် မောင်တားဆီး ပါ
လက်တင်လို ‘CONDUS’ ဆိုတာ
တော်တော် ရှေးကျတဲ့ ကျနော့ အမျိုးရိုးပါ
1844 က စတယ်..နောက်.
Made by latex or polyurethane..
အရောင်စုံ ဆိုက်ဆုံ ပုံစံစုံပေါ့..
ပန်းရောင်..အပြာရောင် လှမှ လှ…
ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့ ကျနော် အလုပ်မဖြစ်ဖူး..
အသည်းယောင် အသားဝါ A to Z
HIV နဲ့virus အမျိုးမျိုး..
ဒီလိုနဲ့ကျနောတို့အမျိူးတွေ ကမ္ဘာလှည့်..
အာရှ အာဖရိက..အမေရိက သြစတေးသျှ..
ကမ္ဘာ အရှေ့ နောက်တောင်မြောက်
ဗူးထဲပိတ်..UN..အထောက်အပံ့ နဲ့ခရီးသွားတာ…
ကျနော်တို့ ဦးရေ..များများစားစားတော့ မရှိဖူး..
ဒီနိူင်ငံက ယောက်ျားတွေ ရှက်တတ်တယ်တဲ့ဗျ…
နိူင်ငံခြားဖြစ် မကြိုက်.. မလို..condom မလိုပါ တဲ့..
အသိနုံနဲ့ရှက်ရမဲ့အရာ မရှက်...
မရှက်ရမဲ့အရာ ရှက်တတ်တဲ့ လူတွေ ရဲ့နိုင်ငံပေါ့
သိတာပေါ့ဗျာ..ပြည်သူအတွက် ကောင်းတာလုပ်လို့ 
ကျနော့ အမျိုးတွေ ခပ်များများ..သူ့ ဆီရောက်ဖူးပါတယ်..
အော်..ပြောရဦးမယ် ကျနော့ အကြောင်း..
ကျနော့ ပိုင်ရှင်က ကောင်မလေး ငယ်ငယ်ပေါ့..
ပေါက်တဲ့နဖူး မထူး..သူ ဒီဘ၀ရောက်လာတာဘဲ
ဒီလို ဒီလိုနဲ့စ လိုက်တာ..
တနေ့ တနေ့လာတဲ့အရွယ်စုံ
ဇောချွေးစို.. အဆီပြောင်နဲ့ လူကြီး..
ဗိုက်ပူ တုံတုံအိအိ .ခေါင်းမွေးအမဲမရှိ..
လိင်ကို ငွေနဲ့ဖလှယ် စားသုံး..မြိန်ရှာ..
အသက်ကလေးတောင် ၂၀ နံပါတ်မတတ်ခင်..
HIV ကိုယ်ထဲ ၀င်ခဲ့တယ်.
ဒါပေမဲ့ သမီးရဲ့ ပိုးတွေ..ထပ်မဖြန့် နဲ့ ..
ဒီလိုနဲ့ကောင်မလေးရဲ့ ပိုက်ဆံအိပ်ကြား..
စာတွေထဲ ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံးမြန်မာပြည်..တဲ့..
အလကားရ လာဘ်လာဘတွေနဲ့ရဲ..
အစိုးရ ပေးစာကမ်းစာနဲ့ ကြံဖွတ်ငနဲ ..
အစိမ်းရောင် ရှေ့တလက်မနောက်ပြောင်နဲ့စစ်သားငနဲ…
ကောင်မလေးက မနှိပ်ရ..သူတို့ က ပြန်နှိပ်ပြတယ်..
တနေ့ တနေ့အယောက် လေးငါးဆယ်…
ဒီကြားထဲ နယ်ထိမ်းတွေ က အလကား သမ သေးတယ်…
ကျနော့ကိုပြ ကောင်မလေးက စကားစပေမဲ့…
“ ဟာကွာ..ဒါ..ဘာလုပ်ဖို့ တုန်း..
ဒီ စစ်ဗိုလ်တော့ အကျိုးနည်း..
ဒီလိုနဲ့ ..အလကား ရတဲ့ငွေနဲ့ ..
လိင် အစားသောက်ကြမ်းတဲ့ ရဲ..
လာဘ်စားကောင်းတဲ့ အစိုးရရုံးက အဖိုးကြီး ဗိုက်ပြဲ..
တပည့်ပိုက်ဆံပေးလို့အလကားရ လာဖြဲတဲ့ စစ်ဗိုလ် ငဖဲ..
တူသောအကျိုး..ကျနော့ အကူမယူချင်တဲ့ အမျိုး
ကောင်မလေး ရဲ့ virus တွေ
ကျနော်သာ သူ့ ပိုက်ဆံအိပ်ထဲ ရက် ၅၀၀ ..
လာတဲ့ ဖောက်သည်တွေ ပျောက်..
ကျနော့ကို သူက စကားစ…
" ငါ့ မှာဒီရောဂါ..ရှိနေတာ..
ဖောက်သည်မပျက်ရဲလို့မပြောပေမဲ့…
မင်းကို သုံးပါ အကြိမ်တရာ ငါပြောရဲ့…
သူတို့အပြစ်မဲ့မိန်းမတွေ ကျွန်ဝယ်ရာအဆစ်ပါ..
သူ့ မိသားစု တစုလုံး AIDS ဖြစ်နေပြီ…
ငါလည်း မကြာ..သေရတော့ မှာပါ…
မကြာခင်..တနိုင်ငံလုံး ဖာ..AIDS ရောဂါသည်။
မင်း က တာဝန်ကြေပါတယ်..
ကျား မသနားတာ..နွားတော့ မချမ်းသာဖူး..
အလောင်းမြေကျ ကံဆိုးသူ ပြည်တန်ဆာမ
သူမ ညီမလေးက သူမ နေရာဆက်ယူရတယ်..
ကျနော့ကို အမွေရ..သူမ လိုဘဲ နေရာတကာသယ်…
AIDS ပွါးလာတာ..ယနေ့ ခေတ်မြန်မာ…
မသဒ္ဓါ ( ၂။၁၇။၂၀၁၀)
အရှက်မရှိ၍ရေးခြင်းမဟုတ်..သိစေခြင်း၍ ရေးခြင်းပါ...နားနဲ့မနာ..ဖ၀ါးနဲ့နာပါ....ဒီလိုနဲ့ ပန်းကောင်းတွေ ကြွေတာများခဲ့ပြီပေါ့
အမှန်ကို မြင်ပါ မရှက်ကြပါနဲ့ တော့
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:39 AM3comments
သားကို မွေးထဲနေ့ ကထဲက အမေ..
တနေ့ တနေ့ ..အစာစားကြီးလာ..
အမေ့သောက ပွေလေလေဘဲ…
ငါ့ သားက မေးဖူးတယ်..
"အမေရယ်..ကျနော် အမေအမေနဲ့ မတူ..
တတောလုံးက ဆင်တွေနဲ့ မတူ..
အဲဒါ ကျနော် ဆင်ဖြူလား..ဆင်နူလား..
မလှပါဘူး အမေရာ..သူများတွေ နဲ့မူကွဲ
ဆင်မ မဲလေးတွေ ဘဲကြိုက်တယ်.."
အကောင် သ်ိန်းကျော် တစ်ကောင်ပေါ်တယ်..
ငုတ်သျှိုး ဗီဇ ပေါ်ပေါက်..ကိုယ်ခနွာအရောင်ပျောက်တယ်..
ဒါ Albino လိုခေါ်တယ်..
ဘာမှ မထူးခြားဖူး..ဆင်ဖြူနဲ့ဆင်မဲ..
အလင်းရောင်ဒဏ်မခံနိုင်..သားက တောင် ပိုနုတယ်..
( လူစင်မမီ..အဲလေ..) ဆင်စင်မမှီတဲ့ ဆင်..
လူတို့ ရဲ့ စကားပုံလို "ဆင်ဖြူမျက်နှာ ဆင်မည်းမကြည့်ဝံ့ တာမဟုတ်ဖူး"
ဆင် မမာလေးမို့ဝိုင်းသနားကြ..
၀ိုင်းရံကာပေးတာ ဒို့ ဆင်မဲတစ်ထောင်
မြန်မာ ရှင်ဘုရင်တွေ အယူသီး.
အရောင်မရှိလို့ဆင်တန်းမ၀င်တဲ့ဆင်..
ရခိုင်ဆင်ဖြူတော် ဖမ်းပါ ဆီးပါ တဲ့..
သား ကိုမြင်ရင်..မိုက်မဲတဲ့ လူတွေလိုချင်ကြမယ်။
ခွါ နှင့် အမွေးဆွတ်ဆွတ်ဖြူ
ဆင်ဖြူတို့ ၏ကြင်အန်.. (၈)ပါး..
ဆင်ဖြူတော်မှီ အမေတို့ ကြံမစုပ်ချင်ဘူး..
ဒီ ဘုရင်ပေမမီ..သားကို အဖမ်းမခံရစေချင်ဖူး..
ကြံဖွတ်တွေ ကြား သားကို မခစားရစေချင်ဖူး..
လူမမြင်အောင် ကိူုယ်ကိုရွှံ့ အပြည့်လူး…
ဒီလို မင်းယုတ်လက်ထက် ဆင်ဖြူလာဖြစ်ရ..
မြန်မာပြည်..နအဖစစ်ဘေးပြေးသူထဲ သားရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များလည်း ပါပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:19 PM0comments
ကြည်ညိုလွန်း၍ လာလှူသော ရွှေငွေကို ညင်းရဲသူုလည်း ဖြစ်တယ်။
ဟယ် ငါမအိုသေးများ ဆိုမလား..
ယနေ့ ခေတ် နအဖ ခေါင်းဆောင်များ..
ပြည်သူများ စားဝတ်ဖူလုံရေး..သင် ဆောင်ရွက်ပေးပါ၏လော
မသဒ္ဓါ ကြိုးကုပ် တပင်တပန်း..
ဘုန်းတော်ဘွဲ့ များ ရေးစမ်းပေးချင်ပါရဲ့..
ရှိနေတာ ပုပ်ဟောင် အဖျင်း..
ကောင်းကွက် တကွက်တောင် ရှာမရဖူး..
ဘယ်သူ ရထိုက် မရထိုက်သည်။
နိုင်ငံတော်၏ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတွက်..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:51 AM 1 comments
ပူနွေးနီရဲသော သွေးများနဲ့ နှလုံးသားရှိတယ်..
စာနာမှု များပြားနဲ့ ..ဂရုဏာတရားလည်းရှိတယ်။
မာကျောသတ္တိတရား..အများအတွက်စွန့် ရဲတဲ့ ဘ၀တစ်ခုရှိတယ်။
အချစ်နေ့ လေးတနေ့ ပေါ့..
မိမိ အဆုံးမဲ့ မြတ်နိုးတဲ့ တိုင်းပြည်အတွက်
မိမိ အပြုံးမဲ့နာကြင်နေတဲ့ အမျိုးသားများအတွက်
အကြင်နာမဲ့ လူသားမဲ့ နှလုံးသားနဲ့ အာဏာရှင်သို့ 
ပြည်သူကို ချစ်သင့်သော အာဏာရှင်..
သင်ဘယ်သူ ပြန်ကြည့် ကိုယ့်လူ သတိပေးတယ်..
အချစ်များနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။
ဘဘရေ..“အာဏာရူးကြီး မှူးကြီး သန်းရွှေ”
အကြီးအကဲဆိုသူ က အရှက်မဲ့ ကြမ်းတမ်း.
ဖော်ညွှန်းပြရာ..အချစ်..သူ ဘယ်သို့ သောသူ
မပြခဲ့တဲ့ ပြည်သူသို့ရင်ဝယ်သား.သူ၏ မေတ္တာတရား..
မဲ့ခဲ့တဲ့ အချစ် ဘယ်မလဲ အကြီးအကဲ၏ အကြင်နာ..
ကဗျာဆရာရဲ့ အချစ်..အာဏာရှင်ကို အသေသတ်နိုင်တယ်.
အချစ်များနဲ့ သူ. သို့ မဟုတ် ကိုစောဝေ
သင် ဂုဏ်ယူလော့ ..မျက်နှာမော့
မသဒ္ဓါ ( ၂။၁၄။၂၀၁၀)
ကဗျာဆရာ စောဝေ က အချစ်ဂျာနယ်တွင် ရေးဖွဲ့ထားသော ကဗျာ။ စာကြောင်း ထိပ်ဆုံး စကားလုံးများ ပေါင်းစပ်လိုက်လျှင် အာနာ(ဏာ)ရူးကြီး မှူးကြီး သန်းရွှေ ဖြစ်လာသည်။ ဤကဗျာကြောင့် ကဗျာဆရာကို အင်္ဂါနေ့ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့က နေအိမ်မှ လာရောက် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့သည်။
ကိုသက် | ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၈
ကဗျာဆရာ စောဝေ၏ ကဗျာဆရာ စောဝေ၏ ကဗျာတပုဒ်ပါ စာကြောင်းများ၏ ထိပ်ဆုံးစာလုံးများကို ဒေါင်လိုက်ဖတ်ပါက “အာနာရူးကြီး မှူးကြီး သန်းရွှေ” ဟူသည့်စာသား ထွက်လာ သောကြောင့် ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့ (အက်စ်ဘီ) က ၎င်းအား ယမန်နေ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း ရန်ကုန် စာပေအသိုင်းအဝန်းက ပြောသည်။
အဆိုပါကဗျာကို ယခုအပတ်ထုတ် အချစ်ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပြီး ယမန်နေ့က ယင်းဂျာနယ်၏ ထုတ်ဝေသူ မောင်ပန်းမွှေး၊ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးမြတ်ခိုင်နှင့် ကိုစောဝေတို့ ၃ ဦးကို စာပေစိစစ်ရေးအဖွဲ့က ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးနောက် ကိုစောဝေ အား အက်စ်ဘီကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် အယ်ဒီတာ တဦးက ပြောသည်။ “အဖြေထွက်မလာတဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာ အနုပညာရှင်တွေက ရတဲ့ အပေါက်ကနေပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ပြတာတွေကို တွေ့နေ ရတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဝေဒနာကို ရင်ထဲမှာ မခံစားနိုင်တော့လို့ ဖြစ်လာမယ့်ဆိုးကျိုး တွေကိုတောင်မတွေးတော့ဘဲ တကိုယ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးတွေ လုပ်လာကြတယ်” ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် အယ်ဒီတာက ပြောသည်။
တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ 25 ရက် 2010 ခုနှစ် 18 နာရီ 38 မိနစ်
ရန်ကုန်ထုတ် အချစ်ဂျာနယ်တွင် “အာဏာရူးကြီး မှူးကြီး သန်းရွှေ” စာသားပါသည့် သူ၏ “ဖေဖော်ဝါရီ ဆယ့်လေး” ကဗျာ ပါရှိခဲ့သဖြင့် ၂ဝဝ၈ ခု ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရကာ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော် အကြည်ညို ပျက်စေမှုဖြင့် အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူးတရားရုံးက ချုပ်ရက်များ တပေါင်းတည်း ကျခံရန် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ပြန်လွှတ်ပေးရန် AAPP-B က ယခုလို ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုစောဝေက စတင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်ကစပြီး ချုပ်ရက်တွေကို ခံစားရမှာ။ အခုဟာက စတင်ဖမ်းဆီးစဉ်က စပြီးတော့ ချုပ်ရက်တွေကို မခံစားရဘဲ ရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့ မေလမှ စပြီးချုပ်ရဲ့ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက် ပထမ အဖမ်းခံရတဲ့ ၃ လ ကျော်ကျော်က မတရား ဖမ်းထားသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ ခံစားခွင့် ဆုံးရှုံးနေရတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအတွက် ကိုစောဝေကို အမြန် ပြန်လွှတ်သင့်တယ်” ဟု AAPP-B တွဲဘက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ကိုဘိုကြည်က ပြောသည်။
ယခုအမှုကို လိုက်ပါပေးနေသည့် ဗဟိုတရားရုံးရှေ့နေ ဦးစိုးမင်းက “အင်းစိန်ထောင် အထူးတရားရုံးက ချုပ်ရက်များဖြင့် တပေါင်းတည်း ကျခံစေဆိုပြီး တရားသူကြီးက အမိန့်ချခဲ့တယ်။ ချုပ်ရက်ကတော့ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ စပြီးတော့ ဖမ်းဆီးတာ ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခုလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် လွတ်လာမည်အထင်ဖြင့် လက်ရှိချုပ်နှောင်ထားရာ မန္တလေးတိုင်း ရမည်းသင်း ထောင်သို့ ကိုစောဝေ၏ ဇနီးသည် ဒေါ်နန်းစန်းစန်းအေး သွားရောက်ခဲ့ရာ ထောင်အာဏာပိုင်များက လွတ်ရက် မစေ့သေးကြောင်း ပြောဆိုသဖြင့် ရန်ကုန်သို့ တဦးတည်း ပြန်လာခဲ့ရသည်။
ရန်ကုန်ရှိ ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက “ချုပ်ရက်ကို ဖမ်းဆီးတဲ့နေ့က စတာမဟုတ်ဘူး။ တရားရုံးကို စွဲတင်တဲ့ နေ့ကနေ စပြီးတော့ သတ်မှတ်တာ ဖြစ်တယ်။ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ရက်နဲ့ တရားရုံးတင်တဲ့ ရက်တွေကြား ချုပ်ရက်တွေ မမှန်မကန် ဖြစ်နေတယ်။ ဖမ်းဆီးတဲ့ ရက်ကို ယမန်ယူတဲ့ ကာလလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ အမှန်က ဖမ်းဆီးရက်ကနေ စပြီးတော့ ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ကျင့်ထုံးလမ်းညွှန်မှုတွေ ရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဦးအောင်သိန်းသည် နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုများကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ယခုအခါ ရှေ့နေလိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခံထားရသူ ဖြစ်သည်။
ဒေါ်နန်းစန်းစန်းက ရမည်းသင်းထောင်သို့ ထောင်ဝင်စာ တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် ကိုစောဝေသည် သွေးဝမ်းသွားသည့် ဝေဒနာနှင့် မျက်စိဝေဒနာကို ခံစားနေရကြောင်း သိရသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:44 PM0comments
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:43 AM0comments
ရာဇပလ္လင်ပေါ် ဖင်ဝဲပေါက်မတတ် မတန်မရာထိုင်
မဆန့် မပြဲစား မင်းတြားဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ကျ ဘဘ ရှုံးတယ်။
ပြည်သူ့ မေတ္တာ မရ.လက်နက်ပြဆိုးသွမ်း လူ့ မိစ္ဆာ။
ဖြူဖြူသင်း နဲ့ ကျ မောင်သောင်းရှုံးတယ်။
ယနေ့ ခေတ်မြန်မာတပ်မတော်သား က
ဖက်ဆစ်ပျောက်ကျားတပ် ကို ရှုံးတယ်။
ရွှေငွေအတွက် လူသတ်..လက်တဆုတ်ရဲ့ ကြေးစားတပ်။
မြန်မာ့အသံ မြန်မာ့သတင်းစာ..Blogger တွေနဲ့ ကျ ရှုံးတယ်။
မှန်ဘီဒိုထဲပြရန် မြန်မာ အကယ်ဒမီဆုတွေ တန်းစီရချင်ရမယ်။
တော်ပါပေ့ဆိုတဲ့ ပေါ်လီစီ ဖားဒါရိုက်တာ.Burma VJ နဲ့ ကျ ရှုံးတယ်။
ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်း..ဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့မဖုံးသာ။
ကြီးပေ့ အိမ်ယာ..ကောင်းပေ့ အစားအစာ..
ခရိုနီ ဆိုတဲ့ လူပြိတ္တာ..ကျော်သူ နဲ့ကျ ရှုံးသွားတယ်။
မရှိတဲ့ စေတနာ..ငွေနဲ့မဖုံးသာ…
အနိုင်တွေနဲ့စစ်တိုက်နေတဲ့ အရှုံး..
လက်နက်နဲ့မနိုင်..ငွေကြေးနဲ့မနိူင်..
ဓမ္မ နဲ့အဓမ္မ..အတ္တ နဲ့ ပရ..
တဏှာလောဘ နဲ့ စွန့် လွှတ်အနစ်နာ
ချိန်ခွင် ဇောက်ထိုး ..အမှန်တရားဘက်သာ အနိူင်ဆုံး..
နိုင်သော်လည်း..သူ ထာဝရ ရှုံးတယ်။
မသဒ္ဓါ ( ၂။ ၁၁။၂၀၁၀)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:09 AM0comments
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:23 AM4comments
ဓါတ်ငွေ့ ကြောပေါ်ထိုင် လျှပ်စစ်မရ။။
ပြည်သူ ဆိုင်တဲ့ ဘဏ္ဍာ..
ပြည်သူကို စည်းဝိုင်းအပြင် ရုံခါထုတ်တဲ့နောက်
ဒို့ တွေ အားလုံး သုံည..
အညံ့မခံလို အသေခံ တွန်းလှန်..
ဘိုးဘွားအမွေ ဒို့ မြေကို
ပြည်သူ အားလုံးပိုင်ကြရန်..အားအင်ယူ တဖန်ပြန်ထ.
မြန်မာပြည်ကို နေ့ သစ်ပြန်စရအောင်..
မသဒ္ဓါ ( ၂။၉။၂၀၁၀)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:19 AM 1 comments
လေလှိုင်းတို့ နဲ့အသံကိုသယ်ယူ
ရေထဲ အပင်စိုက်..လေထဲ အပင်စိုက်
ကမ္ဘာကို ပတ်ရန် မလိုတော့တဲ့
မြန်မာလူငယ်ဘွဲ့ ရ..ကကြီးရေ ကတောင် မသိရ တဲ့ IT.
သိလိုရာ ပညာရှာ..google မှာ..
မြန်မာလူမျိုး gtalk chat တခုဘဲသိသေးတဲ့အခါ..
ဆရာစောကျောင်းမျိုးနဲ့မြန်မာပြည်
မြန်မာ..ဘွဲ့ ရ နိုင်ငံခြားပညာ မူလတန်းတောင်မမီသေးတဲ့အခါ…
ဒီလိုနဲ့အပြောကျယ် စက်မှုနိူင်ငံတည်မတဲ့..
တကယ်ကျ…ကိုယ်လုံးတီးမှန်ဝတ်ရုံနဲ့ဘုရင်ကြီး..
ဘေးက ဖော်လံဖား မင်းကြီး..
တပြည်လုံး made in China ဘဲစိုးမိုးတယ်။
ပညာမတတ် ရူးသူအုပ်ချုပ် .တိုင်းပြည်ပြုတ်နေခြင်း..
၀မရှိ ဘဲ ၀ိမလုပ်နဲ့ ..
အရှက်မရှိ မုန့် စိမ်းပေါင်း..
မသဒ္ဓါ (၂။ ၆။၂၀၁၀)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:33 PM0comments
“ ဟဲ့ နင်တို့အင်္ဂလိပ်ဆေးက မပျောက်
ချင်း ထညက်.ကျို သုံးခွက်တခွက်တင် ဆေးမြီးတိုသောက်”
အမေ့ အာဏာကြောက်ခါ မညင်းရဲ..
ချင်းပြုတ်ရည် ပူပူ ချိူချိုရဲရဲ..
လူတော့ ကျော်သူဆီ အလောင်းအပ်ရမယ် သေချာတယ်…
ရ၀ကျော် အမေ ကျမထက် သူ သန်မာသေးတယ်။
သမီးရေ ပျော်အောင် အိပ် အိပ်..အမေသိပ်တဲ့အခါ..
ဒို့ အရေးအော်နေတဲ့ ည..
တရွေ့ရွေ့ နဲ့လူတန်းထဲကကျမ
အလဲအပြို လူသားတွေ အထပ်လိုက်..
သွေးနံ့ ညှီ..ယမ်းငွေ့ မပီ..
မြင်ယောင်သည် ၈.၈.၈၈ ၏ ပန်းချီ..
အိပ်လို့ တောင် မပျော်…
၈၈ ရဲ့ ဆောင်းအိမ်မက်..
ဦးဏှောက်ထဲ အခုထိ ထင်မြင်ဆဲ..
ဘယ်တော့များ ဒို့ တွေ ၀ဋ်ကျွတ်ပါ့မလည်း..
ကျွန်သက်တွေ ဘဲ ရှည်..
အာဏာ ရှင်က လက်ခမောင်းခတ်နေဆဲ..
ကွဲပြဲ ပြန့် ကြဲနေတဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားတသုတ်ပေါ့
တချို့ကထောင်ထဲ..
တချို့က မြေကြီး ထဲ..
တချို့ က မျက်နှာမွဲ
တချို့က လက်မထောင်ဆဲ..
တချိူ့ က အာဏာနောက်လိုက်ဆဲ
တချို့ က ပါတီထောင်မယ် ရွေးကောက်ပွဲ
တချို့က လေသေနတ်ထောင်ဆဲ..
တချိူ့ လည်း ၈၈၈၈ power online ပေါ် ကော်ဆဲ..
၈၈၈၈ night mare ဆိုတာ
ဒို့ လိုနေတာ ညီညွတ်ကြဖို့ ပါဘဲ…
အာဃာတတွေ စွန့် ကြပါတော့.
တကယ် နိူင်ငံကို ချစ်ရင်…တကိုယ်ရည်ပါဝင်ကြ..
ဒို့ တော်လှန်ရေး စကြရအောင်။
အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ရအောင် အမြစ်ပြတ်
နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲနဲ့အဆုံးသပ်..
အောင်ပွဲနဲ့ သာ ဇာတ်လမ်းဖြတ်ကြရအောင်..
မသဒ္ဓါ ( ၂၊ ၅၊ ၂၀၁၀)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:04 AM 1 comments